Vaovao - Fampahalalana momba ny vahaolana fanamboarana habaka
Ny singa fototra mamorona ny valiny dia piramida telozoro, prisma telozoro, cubes, piramida quadrangular voahidy sns. Ireo singa fototra ireo dia azo atambatra ho endrika fisaka amin'ny telozoro, quadrilateral, hexagon, boribory, na endrika hafa.
Izy io dia manana tombony amin'ny adin-habakabaka, ny lanja maivana, ny fahamendrehana ambony ary ny fahombiazan'ny seismika tsara; izy io dia azo ampiasaina ho trano ho an'ny tranobe toy ny kianja, teatra, efitrano fampirantiana, efitrano fiandrasana, fijoroana amin'ny kianja, hangar, firafitra misy valiny lehibe roa, ary atrikasa, fonony.
Ny fatiantoka dia ny isan'ny tsorakazo miangona eo amin'ny node dia lehibe, ary ny famokarana sy ny fametrahana dia sarotra kokoa noho ny rafitry ny planar.
Izy io dia azo zaraina amin'ny rafitry ny takelaka misy takelaka misy sosona roa sosona, firafitra tokana ary firafitra misy karazany roa karazana akorandriaka. Ny mpikambana ao amin'ny takelaka takelaka takelaka sy ny vatan'ny karazana akorandriaka roa sosona dia mizara ho chord ambony, chord ambany ary mpikambana ao amin'ny tranonkala, izay mitondra fihenjanana sy tsindry indrindra; ny mpikambana ao amin'ny kiran'ny karazana akorandriaka tokana, ankoatry ny fihenjanana ny fihenjanana sy ny tsindry, koa mitondra fotoana fohy sy hery manety.
Ny ankamaroan'ny rafitr'i Shina dia mandray ny firafitry ny takelaka karazana takelaka.
Ny voalohanykarazana dia ahitana rafitra fiaramanidina fiaramanidina. Misy karazany efatra ny kofehy orthogonal orthogonal orthographic, kofehy diagonal orthogonal roa, kofehy diagonal diagonal roa, ary kofehy telo.
Ny faharoasokajy dia misy singa piramida quadrangular. Misy karazany dimy ny gadona piramida quadrangular tsara, ny piramida piramida quadrangular tsara, ny piramida piramidan'ny quadrangular diagonal, ny piramida piramida quadrangular quadrangular ary ny piramida piramida quadrangular miendrika kintana.
Ny fahatelony karazana dia misy singa piramida telozoro, ary manana endrika telo: grid piramida telozoro, grid piramida telozoro nafindra ary grid piramida telozoro tantely. Ny firafitry ny karazan-trondro dia mizara ho vatan-kazo boribory silipo, karazana vatan-kazo boribory karazana taolam-borona ary parabolic hyperbolic karazana akorandriaka karazana akorandriaka arakaraka ny endrika akorandriaka.
Ny firafitry ny grid dia mizara ho kofehy vy, kofehy vita amin'ny beton nohamafisina, ary kofehy mifangaro vita amin'ny vy sy beton nohamafisina arakaraka ny fitaovana ampiasaina. Anisan'izany ny grids vy ampiasaina matetika kokoa.